CBD Yekurwadziwa Kurwadziwa | Yakanyanya CBD muna 2021
Mhedzisiro Inogona Kuguma yeCBDD Yekurwadziwa Runyararo
Cbd, ipfupi kuti cannabidiol, iri kuenda kuburikidza nekumukira mukucherechedzwa se "iyo" nyowani nyowani, iyo inogona kubata mhando dzakasiyana dzehutano mamiriro, anosanganisira, kushushikana, kurwadziwa, uye kushaya hope, kungo tarisa mashoma. Inowanikwa nenzira dzakawanda, kubva ku CBD makirimu nemafuta kuCDD-zvine chikafu uye zvinwiwa. Asi zvinonyatsoshanda here?
Cbd ndeimwe yemakemikari mumiti yeCannabis Sativa. Mbanje inouya ichibva kuCannabis Sativa zvakare, asi CBD haina iyo psychoactive yezvinhu zve tetrahydrocannabinol (THC), inova chikamu chinoshanda mu mbanje. Makemikari ese ari maviri ane chekuita ne endocannabinoid system yatinayo mumiviri yedu. Iyi sisitimu iri mukutarisira kwekugadzirisa kurwadziwa, chishuwo, uye ndangariro, pakati pevamwe.
Kunyangwe pasina humbowo chaihwo hwekurapa hwemhedzisiro yeCDD panyama, kunyanya nekuda kwenzvimbo yegrey iri pamutemo iyo CBD yanga iri kwenguva yakareba, pane humbowo hwekuti padanho rekurapa unogona kushandisa CBD pakurapa kurwadziwa.
Kunyange pasina ruzivo rweveruzhinji pamakiriniki ekuedzwa pakushandiswa kwe CBD yekuzorodza marwadzo, ongororo dzakawanda dzakaratidza kuti CBD inogona kudzikamisa marwadzo nekuzvimba, nemubatsiro ine mashoma mhedzisiro. Kunze kwezvo, vanhu vakataura kuti CBD inodzora kushushikana kwavo uye kushaya hope, mamiriro ayo anowanzo sunganidzwa nekurwadziwa kusingaperi. Neyemutemo weiyo hemp-yakatorwa CBD mumatunhu mazhinji (ayo asina THC), vanhu vazhinji vatendeukira kuCDD senzira yekudzora marwadzo.
Zvinokurudzirwa kuti vanhu vanotambura nemarwadzo asingagumi vataure navanachiremba nezvekutora CBD senge imwe nzira. Zvakangodaro, pane zano kune vanhu vanoda kuyedza CBD yekurwadziwa:
Kusvuta haisiyo nzira yakanakisa: Kusvuta kunogona kukuvadza mapapu, uyezve, haisiyo nzira yekukurumidza yekuzorodzwa.
Maitiro ehutongi akakosha: CBD iri nani kutorwa mune tincture kuti ikurumidze kuita, kana mupiritsi kana akapfava gel makapisi, kune anononoka, akawedzera kusunungurwa.
Tenga kubva kune vane mbiri vanogovera. Kunge mavitamini uye zvimwe zvinowedzera, CBD haina kudzorwa neDFA, saka zvirinani kuitora kubva kukambani ine mbiri, saRed Emperor CBD, ine yechitatu-bato yakaedzwa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Zvirinani kutanga nedosi yakaderera. Wobva wawedzera zvishoma nezvishoma, kusvikira wawana zororo kubva kuzviratidzo zvako. Tevedza zviratidzo zvako kuti uone kana CBD ichikubatsira semushonga wekurapa.
Dzimwe ongororo dzeKiriniki dzakaratidza kuti kunyangwe kana oiri yeCBD iri inowanzo chengetedzwa kubva kune yakasikwa mavambo, CBD oiri inogona zvakare kuburitsa mimwe mhedzisiro. Kuwanda uye kuomarara kwezviratidzo izvi kunogona kusiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe. Iwo akanyanya kujairika mhedzisiro zviratidzo zvinogona kusanganisira:
Shanduko mune chishuwo
Shanduko mune manzwiro
Yakaoma muromo kunzwa
CBD oiri inogona zvakare kuwedzera enzyme yechiropa, inova mucherechedzo wechiropa kuzvimba. Vanhu vane mamiriro echiropa vanogona kushandisa CBD, asi ivo vanofanirwa kushandisa CBD mafuta nekungwarira kwakanyanya, zvine hungwaru vari pasi pekutarisirwa nachiremba anogona kugara achiedza bvunzo dzeropa enzyme mazinga.
CBD mafuta anofanirwa kudzivirirwa zvachose panguva yekuzvitakura nekuyamwisa. A 2018 kudzidza inoitiswa neAmerican Academy of Pediatrics yakayambira vakadzi kuti vadzivise mbanje uye zvimwe zvinogadzirwa necannabis panguva yekuzvitakura nekuda kwenjodzi dzinogona kukanganisa kukura kwemwana. Kunyangwe zvisiri zvachose kuti CBD inopa sei, CBD inozivikanwa kuti inokwanisa kusefa kuburikidza neyakaganhurika chipingamupinyi.
Kana iwe uri kufunga nezve kushandisa CBD mafuta kurapa hutano mamiriro sekurwadziwa, ita shuwa kuti unotaura nemupi wako wekuchengeta hutano kuti uve nechokwadi chekuti ndiyo sarudzo kwayo iwe.
pashurePrevious mumhanyi;Vanoongorora Vanotenda Kuti CBD Inogona Kubata & Kudzivirira Coronovirus.NextNext mumhanyi;Mashandisiro ekushandisa CBD Oiri Yekurwadziwa?